डल्ला फुटाउने खेती - नेपाल
डल्ला फुटाउने खेती
मैले डल्ला फुटाउने खेती सुरु नगरेकामा आफ्नै छोराछोरीलगायत धेरैले गिल्ला गर्दा पनि सहिरहेको थिएँ। तर, आफ्नै अर्धाङ्गिनीले समेत यो आधुनिक खेतीमा नलागेर यस्तै गैबार र पिछडा भएर बस्ने हो भने बाँकी जुनी सँगै नबित्न पनि सक्छ भनेर धम्क्याएपछि मैले बाध्य भएर यो खेतीमा हात हालेँ। त्यसपछि परविारका सबै सदस्य यही विश्वव्यापी खेतीमा चुर्लुम्मै डुब्यौँ।
ल हेर्नूस्, मेरो घरमा डल्ला फुटाउने खेती सपि्रएको। छोरो सोफामा डल्लो परेर डल्ला फुटाइरहेको छ। छोरी ओछ्यानमा गुँडुल्किएर डल्ला फुटाइरहेकी छ। बहिनी तल्लो कोठामा लुकेर डल्ला फुटाइरहेकी छ। भाइ पल्लो कोठामा किताबले अनुहार छोपेर डल्ला फुटाउन व्यस्त छ। श्रीमती धिपधिपे आगोमा दाल बसालेर डाइनिङ टेबिलमा डल्ला फुटाइरहेकी छ। म डँडाल्नु कुप्रो पारेर सकी-नसकी डल्ला फुटाइरहेको छु। मरीतरी अहिलेसम्मा १५ फोक्टा फुटाएँ। सुनेको छु, यो खेतीमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न ६ सय फोक्टाका डल्ला फुटाइसक्नुपर्छ रे!
डल्ला फुटाउनेहरू कोही कसैसँग बोल्दैनन्। एकाग्र भएर डल्ला फुटाइरहन्छन्। बेलाबेला 'ला', 'थुक्क', 'मरिजाओस्', 'लु खा' भनेको र खेती बिग्रेकामा 'खुइय्य' गरेको सुनिन्छ, त्यत्ति हो। डल्ला फुटाउने श्रमिक शौचालयमा पसेपछि बाहिर निस्कन बिर्सन्छ। शौचले च्यापिरहेको श्रमिक शौचालय जानुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सन्छ। डल्ला फुटाउँदा फुटाउँदै भान्सामा भात डढेर खरानी हुन्छ। दूध सुकेर कुराउनी हुन्छ। चियामा चियापत्तीको साटो बेसार पर्छ। चामलै नहाली पानीलाई मात्र सिटी लगाएर भात पकाइन्छ। दालमा चिनी हाले पनि सहिन्छ। केटाकेटीको स्कुल ढिलो हुन्छ। अफिसमा हाजिर छुट्छ। जे सुकै होस्, डल्ला फुटाउन छाडिँदैन। छाड्यो कि अरूले आफूलाई पछाडि छाडिहाल्छन्।
अस्तिको कुरा, अस्पतालमा एउटी बूढी आमैसँग भेट भएको थियो। उनको एउटा आँखो अघिल्लो दिन मात्र अप्रेसन भएको रहेछ, बन्द थियो। एउटा आँखाले हेरेर पनि आमै ड्याङड्याङ डल्ला फुटाउँदै थिइन्। जचाउने पालो कटिसक्यो, आमै घोत्लेको घोत्लेकै। नाति-नातिनाले डल्ला फुटाउने खेतीमा आमैलाई नराम्ररी सल्काइदिएछन् भन्ने लाग्यो।
एक महिनाअघि मेरी भतिजीलाई डल्ला फुटाउँदै ट्याम्पु पर्खेर्र बसेको ठाउँमा गाईले हानेर लडाएछ। तीन दिन अस्पताल बस्नुपर्‍यो। अस्पताल बस्दा झन् उन्नति गरी, थप बीस फोक्टाका डल्ला फुटाई। बिरामी आमाका लागि जाउलो लिएर महाराजगन्ज अस्पताल हिँडेको भाइ डल्ला फुटाउँदा फुटाउँदै जोरपाटी पुगेछ। उता बुहारी कुरुवा बसेकी, सलाइन पानी सकिएर आमालाई खरो भइसकेछ, ऊ डल्ला फुटाउनमै व्यस्त। धन्य, छिमेकी ओछ्यानको बिरामीले देखेर बचाएछ।
न माटो, न सिँचाइ, न मल, न बीउ, न गोरु, न डल्लेठो, केही नचाहिने। न घाममा सेकिनुपर्‍यो, न पानीमा भिज्नुपर्‍यो। खल्तीबाट मोबाइल झिक्यो, डल्ला फुटाउन थालिहाल्यो।होइन, यो 'क्यान्डी क्रस' भन्ने नाम गरेको डल्ला फुटाउने खेती कुनचाहिँ महामानवले आविष्कार गरेर संसारभरि छ्यापछ्याप्ती पारेछ गाँठे ?
अरू त त्यस्तै हो, घरमा आगो लाग्दा पनि डल्ला फुटाउने खेतीमै व्यस्त भएर कसैको पनि घरै ध्वस्तचाहिँ नहोस् है। निरोको बाँसुरीवादनजस्तो।